Wararka Maanta: Arbaco, Sept 19, 2012-Kooxo hubeysan oo degmada Afgooye ku dilay Askari ka tirsanaa Ciidanka Dowladda iyo Qaraxyo saakay ka dhacay
Goobjoogayaal ku sugn Afgooye oo 30-km dhinaca waqooyi-galbeed kaga beegan Muqdisho ayaa sheegaya in qaraxyadu ay dhaceen xilli ay ciidamadu ku jireen howgallo baaritaanno ah, inkastoo aanay jirin khasaare ay geysteen.
"Xalay degmada waxaa lagu dilay askari dhar cad ah, saakayna baaritaanno ayay ciidamadu ka billaabeen xaafadaha degmada, balse laba qarax oo waaweyn ayaa la maqlay intii ay baaritaannadu socdeen," ayuu yiri Cali Nuur oo ka mid ah dadka ku nool degmada Afgooye.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaraxyada, iyadoo qaarkood ay sheegayaan inay ahaayeen kuwo lagu weeraray ciidamada dowladda ee baaritaannada waday iyo warar kale oo sheegaya inay ahaayeen miinooyin ay ciidamadu soo saareen oo ay iyagu qarxiyeen.
Ma jirto cid sheegatay inay mas'uul ka tahay dilka askariga loo geystay, waxaana dilkan uu imaanaya xilli ay degmadaas ka jireen toddobaadyadii lasoo dhaafay xaalado deggenaasho ah; kaddib dhibaatooyin fara badan oo ay ciidamada dowladdu u geysteen dadka ku nool degmadaas.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli ka hadlin qaraxyadii saakay dhacay iyo dilkii xalay loo geystay askariga. Waxaana degmada Afgooye ay ka mid tahay degmooyinkii ay ciidamada dowladdu kala wareegeen Al-shabaab horraantii sannadkan.